IKHETHEKILEYO: I-CMT 'BACHELORETTE PARTY' IINGCEBISO ZOMCWANGCISI WEMPUMELELO WEVEKI YEDRAMA-YASIMAHLA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Ikhethekileyo: UMcwangcisi weCMT's 'Bachelorette Party' wabelana ngeeNgcebiso zaKhe ngeempelaveki eNempumelelo, engenaDrama
Ngu: Esther Lee 08/01/2018 ngo-6: 06 PM
I-Nashville ivele ngokukhawuleza njengenye yeendawo eziphambili zepati ye-bachelorette kweli lizwe, ke ibikukuphela komcimbi wexesha ukuba umboniso wokwenyani ubonakalise ii-antics ezenzeka rhoqo ngeempelaveki kwindawo eshushu. NgoLwesine, nge-1 ka-Agasti, i-CMT iya kuqala ukubonisa umboniso wayo omtsha onesihloko Bachelorette Mpelaveki , Iveliswe yimikhosi efanayo emva kweMTV Unxweme lwaseJersey .
Endaweni yokudibanisa iqela elingahleliyo labantu abahlala nabo kule ndawo, abavelisi bagqibe kwelokuba babone ishishini elibizwa ngokuba yiBach Weekend kwaye lenze umseki kunye nabasebenzi ukuba babe ngamalungu aphambili.
Sineshishini elibizwa ngokuba yi-Bach Weekend ukusukela nge-2014, kwaye siye saziswa malunga nomdlalo weTV kwi-CMT, URobbie Goldsmith , Umsunguli kunye nosomashishini ngasemva kweshishini elise-Nashville, uxelela Ingcaciso kudliwanondlebe. Into esinethemba lokuba umboniso uyayigxininisa esixekweni, kodwa nangobuqhetseba bokuba nomzi mveliso we-bachelorette unokuba nawo-kunye nazo zonke iinkumbulo kunye nokonwaba okubonelela abantu. Siyazi ukuba abantu bashiya isixeko sethu ngezinye zeenkumbulo ezintle zobomi babo.
Ngoluhlu lobungcali emva kokucwangcisela amakhulukhulu amaqela e-bachelorette kubaxumi, uGoldsmith unikezela ngeziqwenga zintathu zobulumko kubafazi abaza kutshata kunye nabafazi abaza kucwangcisa iindlela zabo zokuphuma. Nanini na xa usondeza abahlobo abasenyongweni abangama-7 ukuya kuma-20, kuyakubakho izinto ezimangalisayo ezenzekayo… kunye nomdlalo weqonga, utshilo. Nokuba ngaba ngabantu abasoloko benxilile abagula ngaphambi kwexesha kunokuba kufanele, okanye xa abantu bengavumelani nomcwangcisi. Funda iingcebiso zakhe apha.
Uphando — uLot
Into yokuqala endinokuyenza ukuyenza kukwenza isixa esaneleyo sophando, uxelela iKnot. Buza ingcali ukuba uyakwazi… Isicwangciso kukwenza ukuhamba kweqela ngokufanelekileyo, kuba ukuba akunjalo, akukho mntu uza konwaba.
Ukugcina ixesha kubalulekile
Njalo ulinganise ixesha eliza kuthatha ukwenza izinto kunye neqela, uGoldsmith uyongeza. Ukuhamba kweqela kuhlala kuthatha ixesha elingaphezulu kunokuba kulindelwe, nokuba kungumsebenzi, imoto kwisidlo sangokuhlwa, kuhlala kukho ithuba lokubaleka ngasemva.
unxibe ntoni emtshatweni ongaphandle
Nyula iNkokeli enye
Inokubakho inqaku elinye kuphela umntu lokusingatha nokwenza ngabom isiganeko esikule meko. Wonke umntu unoluvo lwakhe lokuba le mpelaveki izakuba yintoni, utsho. Kufuneka kubekho inkosi enye-umntu onesicwangciso kwaye usanganisa zonke izimvo.
Iziphumo zinokuba yintlekele ukuba akunjalo. Into oyibonayo emva koko iqela liphela ngentsimbi yesi-8. ngaphandle kwikona ye-4 kunye ne-Broadway, beme ngezandla zabo ezipokothweni bezibuza ukuba bayaphi, uyaphawula. Kwaye ibha nganye inomgca wabantu abangama-150 ngaphandle, ngoko ke abafumananga amava okwenyani.
Ngokubanzi, uGoldsmith uthi ukuhamba ngeepakethi kunokuba nzima, kodwa konke malunga nokubeka ulindelo. Uphando lubonisa ukuba iqela eliphakathi le-DIY bachelorette li-avareji ye- $ 800, uyaphawula. Abantu kuye kufuneke bangene kwimeko besazi ukuba kuya kudla ixesha kunye nemali ngokuqinisekileyo. Yiba nengqiqo xa ungena kuyo. Isiseko sethu sendleko yi- $ 250 kumntu ngamnye. Ngaba iqela lonke linokukwazi ukuyifumana? Buza le mibuzo.
Bukela iphambili ye- Bachelorette Mpelaveki kwi-CMT ngo-11 ebusuku. ET ngolwesine, Agasti 2.
Imibono yokulala eparis
Iminyaka engama-30 isipho somtshato
iingoma zenkqubo yomtshato
izimvo zokubala zangaphandle
ixabisa malini imitshato
Tim witherspoon kelly rowland umahluko wobudala